ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန. ယခင် ပို့ ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား
ⓘ ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန. ယခင် ပို့ ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန ..
လေကြောင်းမိုးလေဝသဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ၁။ လေကြောင်းမိုးလေဝသဌာနခွဲသည် လေကြောင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးရုံး ၈ရုံးကို အောက်ပါဒေသများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး လေကြောင်းမိုးလေဝသဆိုင်ရာ တိုင်းထွာချက်များ တိုင်းတာရယူခြင်း၊ လေကြောင်းခရီးစဉ်များအတွက် ခန့်မှန်းချက်များ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းကို ၂၄ နာရီ အချိန်ပြည့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည် - က နေပြည်တော်လေဆိပ် ခ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ဂ မှော်ဘီလေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ဃ မိတ္ထီလာလေတပ်စခန်းဌာနချုပ် င မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် စ မြစ်ကြီးနားလေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ဆ တောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ဇ နမ့်စန်လေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ၂။ လေကြောင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးရု ...
ယခင် ပို့ ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနများ အဖြစ်ဝန်ကြီးဌာန ၃ ခုသို့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၁၉၉၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် နေ့စွဲပါ စာအမှတ် ၃၅၂ - ပဆ/ခွဲ ၉၂ ဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမူတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ၃၆/၉၂ မှ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် ပို့ဆောင်ရေး ဦးစီးဌာနအား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနအား စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ဌာနခွဲ၊ စီမံရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် မှတ်တမ်းဌာနခွဲအဖြစ် ဌာနခွဲ ၂ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အာဆီယံ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ငယ်အား ၁၉၉ရခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဝန်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဖြင့် ဤဦးစီးဌာနတွင် တွဲဘက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ရေးဆွဲတင်ပြလာသော နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ အရ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ရငွေ၊ သုံးငွေ လျာထားချက်များအပေါ် အမှန် ဆောင်ရွက်နိုင်မူများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအသုံးစရိတ်များကို စိစစ်စုစည်းခြင်း၊ ရည်မှန်းချက်များအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများကို အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။
နှစ်စဉ်နိုင်ငံတော်မှ လျာထားသတ်မှတ်သော ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသားတင်ဝန်ဆောင်မူတန်ဖိုး GDP တိုးတက်မူ အခြေအနေအား လစဉ် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိမူ အခြေအနေများနှင့် ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအလိုက် ကြွေးမြီပေးဆပ်မူ အခြေအနေများစိစစ်ခြင်း။
ပို့ ဆောင်ရေးကဏ္ဍနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပို့ ဆောင်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ထုတ်ပြန်ပေးရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအား ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲပေးရန်။
ပို့ ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများအား ကိုက်ညီမှုရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
ပို့ ဆောင်ရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံး၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊ ရသုံးမှန်းခြေစာရင်းများ၊ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများအား ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲပေးရန်၊
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသအတွင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော စီမံချက်များအား ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဥပမာ- အာဆီယံ၊ ဘင်းမ်စတက်၊ အက်မက်စ်၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသ)
ပို့ ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် မြှင့်တင်ပေးရန်၊
ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် ၅ ၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း + ၉၅-၁ ၂၉၃၀၃၈၊ ၀၆၇ ၄၁၁၀၃၃
ဖက်စ် + ၉၅-၁ ၂၀၂၈၃၇၊ ၀၆၇ ၄၁၁၄၂၀
အီးမေးလ်: dept.transport mptmail.net.mm